Kulankii Duqa Magaalada Kopenhagen iyo wasiirad ka Socota DGPL....
Wafdigii wasiiradda haweenka iyo horumarrinta qooyska ee dawlad goboleedka Puntland marwo Caasho Gelle ayaa waxay la kullantay maalinkii jimcaha ee 11 april maayarka magaalada Kopenhagen oo isagu gaar ahaan qaabilsan arrimaga suuqa shaqada iyo isdhexgalka bulshada mudane Jakob Haaugaard, oo isla markaana ah maayarka ugu da'da yar Kopenhagen.
Shirkaas oo ka dhacay xafiiska maayarka ee ku yaal faras magaalaha Kopenhagen ee loo yaqaan Rådhuset ayaawaxaa dhankisa ku weheliyay kulanka xoghayntiisa iyo xubno matalayay mid ka mid ah mashaariicda sare loogu qaadayo xirfadda shisheeyaha deggan Kopenhagen, gaar ahaan dumarka. Mudane Jakob ayaa wuxuu wasiiradda soo dhoween diiran dabadeed uga warramay xaaladda guud ee Kopenhagen oo ah caasimaadka Danmark, isaga oo isla markaa ka warbixiyay mashaariicda kala duwan ee ay magaaladu ugu talagashay kor u qaadista xirfadda shsheeyaha ku dhaqan magaalada, waayo waxaanu ogsoonahay buu yiri maayarku in in dad badan oo shsheeya ah ee dalka ku yimaadeen qaxootinimo, kuwaas oo ay dhibaatooyin farabadan ka soo gaareen musiibooyinkii ay ka soo qaxeen.
Maayarku wuxuu wasiiradda u sheegay in Kopenhagen ay tahay magaalo ay jinsiyada badan oo kala duwan ku dhaqanyihiin, iyada oo ay muwaadiniintu yihiin kuwo u siman xuquuda iyo waajibaadkaba, loona baahanyahay in ay gacan ka gaystaan daryeelka danahooda iyo tan magaaladaba.
Ka dib waxaa isna kulanka ka hadlay Maxamed Gelle oo ah madaxa xiriirka shabakadda ururada Somaliyeed ee Danmark, oo sheegay in ay tahay arrin ammaan mudan dadaalka ay Kopenhagen ugu jirto sare u qaadista xirfadda qaxootiga iyo shisheeyaha magaalada ku dhaqan, iyo waliba la dagaalanka midab iyo diin takoorka ay dabkeeda shidayaan axsaabta qaarkood iyo shisheeyaha qaarkood, kuwaas oo gabbaad ka dhiganaya diimaha si ay isaga horkeenaan diimaha kala duwan. Gelle wuxuu sheegay in Kopenhagen oo 20% dadkeedu ay yihiin shisheeye , hadana uu ku guuleesan waayay xisbiga xag jira ee Danish peoples party in uu xubin ka helo Kopenhagen, meesha uu xubno badan ka helay deegaanada aanay deganayn shisheeyuhu.
Mudane Maxamed Gelle ayaa wuxuu maayarka u soo bandhigay in Kopenhagen ay sida Gottenborg oo ku taal Sweden uga faaidayso xirfadda qaxootiga Somaliyeed ee magaalada deggan in ay wax ugu qabtaan Somalia ( Mashruucaas oo loo yaqaan Gottenborg initiativ). Waayo waxaa jira dad badan oo somaliyeed oo aan xirfadooda ku isticmaalin Danmark.
Intaa ka dib waxaa iyana kulanka ka hadashay wasiiradda haweenka iyo horumarrinta qooyska marwo Caasho Gelle, oo uga mahadcelisay maayarka soo dhowaynta sharafta leh iyo warbixinta uu siiyay. Sidoo kale marwo Caasha Gelle waxay maayarka iyo dawladda Danmarkba uga mahad celisay deggenaanta iyo hoyga cusub ay siiyeen dadka Soomaliyeed ee ka soo barakacay dalkoodii, iyada oo isla markaa ka codsatay maayarka iyo shacabka daanishkaba in ay dulqaad u yeeshaan dhibaatooyinka ay dadkaas qaarkood la iman karaan ! .
Wasiiraddu marwo Caasha Gelle, waxay maayarka uga warbixisay xaaladda guud ee Puntland, gaar ahaan xaaladda haweenka iyo qooyska oo ay ku tilmaantay in ay tahay lafdhabarka jiritaanka bulshada Soomaliyed ee Puntland. Sidoo kale wasiiraddu waxay qirtay in mashruuca Gottenborg initiativ uu wax wayn ka qabtay arrimaha la xiriira waxbarashada iyo caafimaadka, sidaa darteed ay ku rajo wayntahay in Kopenhagen ay kaga dayato,
Waxaa iyana goobta ka hadashay marwo Fatima Jibriil oo ka warbixisay mashruuca dekedda LaasQoray, oo ay ku tilmaantay in uu wax ka qaban doono ka hortagga xaaluinta iyo daryeelka danaha dadka reer guuraaga iyo houmarrintooda. Sidoo kale waxaa kulanka goobjoog ka ahaa Salax Saciid Diiriye, oo ah gudoomiyaha ururka Puntland Aid Service oo isagu martiqadkan u fidiyay wafdiga.
Gabagabadii shirka waxaa uu maayarku mudane Jakob Haaugaard hadiyad qiima badan gudoonsiiyay wasiiradda marwo Caasho Gelle, isaga oo islamarkaana sheegay in uu xiiseenayo in ay fikrad ku dayasho mudan ka qaataan mashruuca Gottenborg iyo waliba in xiriir saaxibtinimo loo sameeyo Kopenhagen iyo magaalooyinka Somaliyeed – marwo Casho Gelle waxay dhankeeda iyana gudoonsiisay maayarka buugag ka warbixinaya xaaladda Puntland, iyada oo isla markaa maayarka uga mahadcelisay hadiyadda qiimaha badan, una sheegatay in dawladda iyo shacabka Puntland ay mar walba gacmo furan ku soo dhowaynayaan.
Ugu dambayntii wuxuu mudane Jakob Haugaard si lama filaan ah gudoonsiiyay mudame Maxamed Gelle bilad sharaf wax qabad, lana xirirta hawlaha kala duwan ee wax ku oolka ee uu had iyo jeer gacan ka gaysto, gudoonka billadaas oo mudane Gelle uu uga mahadceliyay maayarka, kuna tilmaamay in ay tahay mid dhiiragalin siinaysa.
Puntland Aid Service Puntland Aid Service